I-HLQ INDUSTRIAL COQUETMENT CO., LTD (Igama langaphambili: DaWei Induction Heating Machine Co., Ltd) U ngokukodwa kwi-Induction Heating machines kunye ne-ultrasonic welding machines kunye nokuthengisa ngaphezulu kweminyaka eli-15. Oomatshini bagubungela ubuQinisekiso boPhezulu boMbane oMatshini oMiselweyo kunye noMatshini wokuShushubeza, umatshini weplastiki wokuwelda, isinyithi sentsimbi, i-Air Cooled Induction Heating Machines, iiFlexible Brazing Systems, i-Auto Induction yokuQinisa iZiko, inkqubo yoQinisekiso lokuQinisa, iAluminiyam kunye neeNdawo zokunyibilikisa iCopper. IiWelders zeTyhubhu kunye neeNkqubo zokuLungisa iiThermal. Ziye zisetyenziswe ngokunyanga kunyango lobushushu, ukubopha, ukubopha, ukuwelda, ukuqulunqa, ukunyibilika, ukutshisa kunye nezisombululo ezifanelekileyo.Ukuguqula abaguquleli ukusuka kwi-500Hz ukuya kwi-2.0MKHz frequency kunye ne-IGBT yamandla ukusuka ku-5 ukuya ku-2000 KW.
Amashishini okushisa sebenzisa ezona zinto ziphambili zombane kunye nobuchule obukhethekileyo obutsha obuphezulu.Bangakwazi ukufudumeza isinyithi ngokukhawuleza nangokungaphelelanga. Banokungena ngokungenasinyithi kufudumeze isinyithi kude kube fuse isinyithi ngaphandle kokunxibelelana nesinyithi
ngqo. Thelekisa nezinye iindlela zokufudumeza, umatshini wethu wokufudumeza induction unezibonelelo ezininzi: imeko eqinileyo, ukuzilawula kunye nomsebenzi wokuzikhusela. Iqala ngoxinzelelo olufunekayo kunye namanzi, ithatha indawo encinci yomgangatho kwaye ifuna ixesha elincinci lokuqalisa kunye nokucima, ukufudumeza ngokukhuselekileyo, ngokufanelekileyo ngaphandle kokungcola.